အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် သိမှတ်စရာအချက်များ | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးဘဝမှာ သန်စွမ်းကျန်းမာတဲ့ အရိုးတွေကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ ဒီအရိုးတွေကို ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းကြရပါတယ်။ အရိုးတွေက ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေကြပါတယ်။
အရိုးတွေကို သတ္တုဓာတ်များ (ကယ်ဆီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်)၊ အသားဓာတ်များ(ကော်လာဂျင်) နှင့် အခြားသက်ရှိဆဲလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ရောက်ရင် အရိုးများပိုကြီးလာခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် အရိုးဟောင်းတွေပျက်စီးပြီး အသစ်တွေအစားထိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စားတဲ့အရာတိုင်း၊ ဆေးတွေတောင်မှ အရိုးရဲ့သန်မာမှုနဲ့ ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်မှုတွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အရိုးပွခြင်း (အရိုးတွေအားနည်းပြီး ကျိုးလွယ်ခြင်း) ကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသိထားခြင်းဖြင့် အရိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Estrogen ဟော်မုန်းက အရိုးသိပ်သည်းမှုကိုအားကောင်းစေပါတယ်။
သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ estrogen ဟော်မုန်းပမာဏကျဆင်းသွားတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပွခြင်းပိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရိုးသိပ်သည်းဆက5နှစ်ကျော်အတွင်း 20% လောက် ကျဆင်းသွားတယ်လို့ လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ oestrogen ဟော်မုန်းက အရိုးအဟောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီး အသစ်တွေနဲ့လဲလှယ်တဲ့နေရာမှာကူညီတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ ရာသီစက်ဝန်းရပ်သွားရင် (သို့) estrogen အလုံအလောက်မထုတ်နိုင်တော့ရင် ရလဒ်အနေနဲ့ အရိုးတွေဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကတော့ အသက် 65 နှစ်အရွယ်ရောက်ရင် အရိုးပွခြင်းဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
2. အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းက အရိုးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်မသောက်ခြင်းနဲ့ အရက်သောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့က အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းက အရိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကိုဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် အရိုးအားနည်းစေပြီး ပျက်စီးစေပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းက လဲရင် အရိုးကျိုးခြင်းကိုပိုဖြစ်စေပါတယ်။
3. အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကယ်ဆီယမ်အပြင် အခြားဓာတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။
အရိုးကျန်းမာစေရန် အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတစ်ယောက်မှာ ကယ်ဆီယမ် တစ်နေ့လျှင် 1000mg၊ အသက် 51-70 အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်နေ့လျှင် 1200mg လိုအပ်ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ အသားဓာတ်၊ ဗီတာမင် D တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D က ကယ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကို 50% ပိုပြီးကောင်းစေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့လျှင် ဗီတာမင် D 600 IU, အသက် 70 အထက်အတွက် တစ်နေ့လျှင် 800 IU လိုအပ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့ရင် အရိုးတွေက ဗီတာမင် D ဓာတ်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ငါး၊ အသည်း၊ နို့ တွေမှာ ဗီတာမင် D နဲ့အသားဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပေမယ့် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ကိုရရှိဖို့အတွက် ဖြည့်စွက်စာတွေ နဲ့ ဆေးတွေသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ သကြားနဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှကယ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကို ဟန့်တားတဲ့အတွက် အရိုးအတွက်မကောင်းပါဘူး။
4. အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အစာချေစနစ်ကောင်းမွန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အူရောင်ရောဂါ၊ lactose နဲ့ဓာတ်မတဲ့သောရောဂါ၊ အစာမကြေရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်း စတဲ့အစာချေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေအနေတွေက အရိုးအားနည်းစေပါတယ်။ နာတာရှည်ဝမ်းအရည်တွေသွားတဲ့ရောဂါရှိသူတွေမှာ အရိုးအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို မစုပ်ယူနိုင်ပါဘူး။
5. စားချဉ့်ပြန်ရောဂါကုသဆေးတွေကလည်း အရိုးအားနည်းစေပါတယ်။
အက်ဆစ်ချေဖျက်တဲ့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ အလူမီနီယမ်ပါဝင်တဲ့ဆေးတွေက သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကယ်ဆီယမ်တွေကို ကုန်ခမ်းစေတဲ့အတွက် ဒီဆေးတွေအများကြီးသောက်ခြင်းကြောင့် အရိုးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။
6. စတီးရွိုက် (steroids ) ဆေးတွေကလည်း အရိုးအားနည်းစေပါတယ်။
Cortisone, prednisone, dexamethasone စတဲ့ စတီးရွိုက်ဆေးတွေက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အရိုးတွေဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ glucocorticoids, corticosteroids စတဲ့စတီးရွိုက်ဆေးတွေကို လေးဖက်နာရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ဓာတ်မတဲ့ခြင်း၊ Crohn’s disease၊ ကင်ဆာနဲ့ ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအစားထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ သောက်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင် ပမာဏအနည်းဆုံးနဲ့ အချိန်အတိုဆုံးသောက်ရပါမယ်။ ဒီဆေးတွေသောက်နေစဉ်အတွင်းမှာ အရိုးကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါမယ်။
7. Phenobarbital (Barbiturate) တွေက အရိုးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေပါတယ်။
အတက်ရောဂါ၊ စိတ်ပူပန်မှုနဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါတွေကိုကုသဆေးဖြစ်တဲ့ phenobarbital ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ စွဲသွားတတ်ပြီးတော့ လွဲမှားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ Dilantin ဆိုတဲ့ အတက်ကျဆေးကလည်း အရိုးဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ ဒီဆေးတွေက ကြာကြာသောက်လေလေ ဆိုးကျိုးပိုများလေလေဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဘယ်ဟာပိုများလည်းဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှသောက်ပါ။
8. ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲမှာ သွေးဆဲလ်တွေပြုလုပ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာရှိတဲ့ သွေးနီဆဲလ်တွေက သက်တမ်းအကြာကြီးမရှည်တဲ့အတွက် အမြဲအသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဆဲလ်အသစ်တွေကို ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲမှာပြုလုပ်ပါတယ်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဆိုတာကတော့ အရိုးရဲ့အလယ်မှာပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ စွမ်းအင်တွေရရှိစေဖို့အတွက် တစ်နေ့ကိုသွေးဆဲလ်များသန်းနဲ့ချီပြီး ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။